Botswana dia manolotra ny Levy fampandrosoana ny fizahantany vaovao
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Botsoana » Botswana dia manolotra ny Levy fampandrosoana ny fizahantany vaovao
Nanoro hevitra ireo mpanjifany mandeha any Botswana i South Africa Airways fa mampiditra Levy Development Development Levy vaovao ny governemanta. Ny haba vaovao amin'ny $ US30 dia mihatra amin'ny 1 Jona 2017 ary hisy fiantraikany amin'ny mpitsidika rehetra any Botswana avy any Aostralia.
Ny tanjona voalaza ao amin'ny haba dia ny hanangona vola ho an'ny fiarovana sy fampandrosoana ny fizahantany eto amin'ny firenena ary hanohanana ny fitomboan'ny indostrian'ny fizahan-tany any Botsoana. Ny haba dia tokony aloa amin'ny seranan-tsambo rehetra tafiditra ao anatin'izany ny seranam-piaramanidina sy ny tsangantsangana.
Ny fandoavam-bola dia amin'ny alàlan'ny milina fandoavam-bola elektronika amin'ny alàlan'ny vola (USD $) na miaraka amin'ny carte de crédit sy carte de crédit. Aorianan'ny fandoavam-bola dia hamboarina ny tapakila mifandraika amin'ny pasipaorin'ilay mpitsidika izay atolotra an'ireo tompon'andraikitra misahana ny fifindra-monina izay hanamarika ny fandoavam-bola ary hanisy tombokase ny pasipaoro. Ny tapakila dia manan-kery mandritra ny 30 andro ary manan-kery ho an'ny firaketana marobe ho an'ny firenena.
Ho fampahalalana bebe kokoa dia jereo botswanatourism.co.bw/tourismlevy
Hornblower Cruises & Events dia nanambara fotoana iray indray mandeha isaky ny androm-piainana hiditra ao amin'ny John Wayne Cruises fitsingerenan'ny andro nahaterahana ao Newport Beach